Maitiro ekugadzirisa zvakapetwa zvirimo mubhizinesi rako redhijitari? | ECommerce nhau
Maitiro ekugadzirisa zvakapetwa zvirimo mubhizinesi rako redhijitari?
Jose Ignacio | | Marketing, SEO
Duplicate zvemukati zvinogona kuita zvakanyanya kukuvadza kune zvido zvewebsite yako. Kusvika pakuti inogona kukanganisa zvakananga kuderera kwekushanya. Asi kunyangwe mune e-commerce domains sezvo inogona kukanganisa kushambadzira kwezvako zvigadzirwa kana masevhisi, sezvaunozoona mune ino chinyorwa.
Muzviitiko zvese, uye chero chiitiko chinoitirwa webhusaiti yako, chero zano rinofanirwa kuve rakanangana nekudzivirira zvakapetwa zvemukati. Nekuti uine chokwadi chese kuti zvinokonzeresa iwe rimwe dambudziko kubva zvino zvichienda mberi. Iko kurambwa kunoitika kubva kune imwechete injini dzekutsvaga dzinoedza kuranga urwu rudzi rwemiitiro pakati pevashandisi veadhijitari. Uye nekuda kweichi chikonzero iwe pachako haugone kusiyana uye kutora zviito izvi zvisingadiwe.
Mukati meichi chirevo chizere, zvakapetwa zvemukati zvinogona kuve nemhedzisiro yakawanda pazvinhu zvaunofarira nezvehunyanzvi. Uye mukuwedzera, yemhando dzakasiyana kuitira kuti zvinokuvadza zviwedzere kubva panguva iyoyo zvichienda mberi. Kubva pane yakanyanya kusagadzikana nharaunda mune yekushambadzira mari kusvika kune yakaderera kuvepo kana kuoneka pane yako webhusaiti. Chero zvazvingaitika, unofanirwa kufunga kuti zvakapetwa zvemukati hazvimbogadzirise zvaunofarira.
1 Dzokorora zvinyorwa: zvese zvinogona kuitika kwauri
2 Zvimwe zviitiko zvinogona kugadzirwa pawebhu
3 Maitiro ekugadzirisa aya matambudziko mune zvemadhijitari zvemukati
Dzokorora zvinyorwa: zvese zvinogona kuitika kwauri
Kubva ikozvino zvichienda mberi tichaenda kutarisa zvimwe zvakashata mhedzisiro umo zvadzokororo zvemukati zvinogona kuzviratidza. Imwe yeakanyanya kukosha ndeye iyo yakabatana zvakanyanya nekushambadzira purofiti. Mupfungwa, kuti iwe unogona kurangwa nekuda kwerudzi urwu rwezviito zvinotambudzwa neakasiyana injini dzekutsvaga. Kusvika padanho rekuti iwe unogona kunyange kupererwa nemari kubva kushambadziro.
Chimwe chinhu chinoratidzira zano rakashata reaya mashandiro pane webhusaiti inotarisirwa nevashandisi ndeyekuti nguva yega yega chinzvimbo chako chinenge chakanyanya kushomeka. Uye kusvika padanho rekupedzisira zvinogona kuve zvisina basa zvakanyanya. Ichi chinhu zvakare zvinoreva kuti nhamba yako yevateveri kana vashandisi inoderera zvishoma nezvishoma. Pamwe usingazive zviri kunyatso kuitika kwauri mune yako digital modhi.
Icho zvakare chiratidzo chiri pachena chekuti zvemukati zvekugadzirwa zvakaderedzwa kusvika pakunyanyisa izvo zvinogona kukanganisa yako digital modhi. Nekuti imwe yeanonyanya kuzivikanwa mhedzisiro yezvakadzvanywa zvemukati ndeyekuti inoderedza zvinotevera pakati pevashandisi kana vatengi. Kusvikira kutora mhedzisiro kumahombekombe ayo anogona kuve akasarudzika kubva kune chero nzira yekutengesa. Dzimwe nguva usingazive iwe kana kunyangwe iwe ukazviona munguva.
Kune rimwe divi, zvakapetwa zvemukati zvinogona kutungamira kune zvinoda zviito zvevamwe mamaneja emukati. Vanogona kudzikisira mamwe emasevhisi aunowanzove uine. Ichi chinhu chaunofanirwa kuongorora kuti urege kuwira mumamiriro asina kunyanya kukosha uye anogona kukuremera mune zvirimo kana mune chimwe chinhu chakaomarara senge yako yekutengesa zvemagetsi.
Zvimwe zviitiko zvinogona kugadzirwa pawebhu
Nekudaro, zvakapetwa zvemukati zvematambudziko zvinogona kuve neakasiyana mavambo, asi izvo zvinogona zvakare kukuvadza zvakanyanya kune zvako zvaunofarira. Imwe yadzo yakajairika iwe yaunogona kuwana ndiyo iyo inoreva kana iwe uchigona kuve neanopfuura imwe url yeiyo imwechete saiti yedhijitari. Chinhu chidiki chekudzivirira mamiriro asingadiwe kugadzira redirect kune imwe. Nenzira iyi, iwe uchave nechokwadi chekuti pakupera kwezuva zvirimo mune imwe uye imwe kero yewebhu webhusaiti hazvionekwe.
Hazvishamisi kuti chimwe chezvinangwa zvedu ndechekudzikisira mhedzisiro yekuonekwa kwezvakanyorwa zvinyorwa kana zvinyorwa. Kuva chokwadi chakajairika kupfuura zvingaratidzika kwatiri kubva pakutanga. Asi chero zvakadaro, zvichave zvakakosha kuti isu tione mamwe ayo akakosha mhedzisiro munguva. Semuenzaniso, iwo atinozokutsanangurira pazasi:
Goverana iwo iwo ma tag
Iwe unogona kusazviziva, asi kana iwe uchikombamira kukudziridza aya maitiro ayo asina kukurudzirwa kune vese vashandisi, iwe unofanirwa kuziva kuti zvese zviri mukati zvinogona kugovana iwo iwo ma tag uye meta tsananguro pamapeji akasiyana ewebhu. Mhedzisiro yacho ndeyekuti yako yekutsvagisa injini ichave isinganyanye kushanda kupfuura zvave kuita kusvika zvino.
Tarisa kune kunobva ruzivo
Kushaikwa chero chinongedzo chekunze kune sosi yeruzivo rwega kunogona zvakare kuranga zvaunofarira zvehunyanzvi. Icho chidiki chidiki chisingazodhure iwe kwakawanda kuedza kuzviita uye zvinodzivirira inopfuura rimwe dambudziko mukugadzirisa zviwanikwa zvewebsite yako.
Chengetedza kugovana zvemukati
Hatigone kukanganwa kuti panogona kuuya nguva apo patinogovana zvemukati medu nemamwe mawebhusaiti nepfungwa yekuonekwa. Asi nenzira isiri yehunyanzvi uye ndipo pakavhiringidzika uye matambudziko anogona kuitika mune ino mhando yekuita kwedhijitari. Ichi chinhu chinoitika nehumwe huwandu neinoburitswa nevechisimba uye chishuwo chekushandisa iyi ruzivo mune zvakawanda zvepamhepo zvemukati.
Matambudziko akawedzeredzwa muzvitoro zvepamhepo
Kana iwe uri muzvinabhizimusi ari kutarisira bhizinesi kana chitoro chemagetsi, unogona kuona kuti kana iwe ukaita zvakapetwa zvemukati pakupedzisira, zvinogona kukanganisa kubatsirwa kwebasa rako rehunyanzvi. Kuburikidza nezviito zvinotevera:
Kushanya kuchave kushoma uye kushoma
Munguva yepakati, uye zvakare munguva yakareba, kutengesa kwezvigadzirwa zvako, masevhisi kana zvinyorwa zvinotambura. Kusvika padanho rekusvika pamhedziso yekupedzisira yekuti iye munhu anoitisa iyi yekutengeserana anga achidzokorora zvinyorwa.
Kuderera kwevatengi kuvimbika vatengi
Kuvimbika kwevatengi kunenge kusingagutsikane pane zvaunofarira sediki uye wepakati muzvinabhizimusi. Kwete chete mune nyowani asiwo mune idzo dzakanangana nepfungwa dzaunoronga kwemakore mazhinji.
Kuonekwa nyore nyore neinjini huru kana injini dzekutsvaga, hapana mubvunzo kuti iwe ucharangwa zvakakomba nehunhu huripo kune vashandisi kuti vataure nekambani yako yedhijitari.
Iwe unenge uine mamwe matambudziko akawanda kupfuura kare kuti kushambadzira kuisirwe uye ichi chinogona kuve sosi yakakosha kwazvo yemari yako. Kusvika pakuti inogona kutokanganisa bhajeti rako regore.
Maitiro ekugadzirisa aya matambudziko mune zvemadhijitari zvemukati
Saka kuti iwe ugone kunzvenga izvi uye nezvimwe zvisingadiwe, isu ticha taura akateedzana enhungamiro dzebasa dzinogona kukubatsira iwe mune zvinangwa zvinoteedzeredzwa pamusoro uno. Nemazano, mamwe akajairika, asi mamwe anonyatsoratidza uye pamusoro pezvose zvitsva. Iwe unoda here kuzviita kubva zvino zvichienda mberi? Zvakanaka, tora penzura nebepa nekuti unogona kuzvida pane imwe nguva muhupenyu hwako hwehunyanzvi.
Pasina mamiriro ezvinhu teedzera zvemukati zvemukati. Nekuti iwe zvakare une zvishandiso zvinoona izvi zvakashata zviito paInternet uye zvine basa rekutevera zvakapetwa zvemukati zvinobudirira. Zvakakodzera kufunga.
Kana pane chero mamiriro ezvinhu iwe uchifungidzira kuti chimwe chinhu hachisi kushanda zvakanyanya pawebhusaiti yako kana e-commerce, uchagara uine zviwanikwa sekukumbira nyanzvi kune mazano. Nechinangwa chikuru icho webhusaiti yako yakanganisa zvakanyanya.
Ngwarira kwazvo, nekuti haufanire kungotarisira zvemukati zvemadhijitari. Kana zvisiri, pane kudaro, iwe unofanirwa kunge uchinyatsoziva nezvekunyorwa kwemeta tsananguro. Kukundikana kutevedzera ruzivo kunogona kukupa kusagutsikana kwakakomba mumwedzi iri kuuya.
Kana iri nyaya yakasarudzika, chokwadika haufanire kunetsekana nezve kuita kwakasarudzika. Zviri mune zvakajairika zviitiko apo iwe uchafanirwa kutora inopfuura imwe mhinduro. Kusvika padanho rekuti uchafanirwa kuvabvisa kubva pakutanga uye nenzira yakanyanyisa.
Kuti udzivise matambudziko akakura, hachisi chikumbiro chakaipa kudzosera izvo zvinyorwa kumavambo mavara kana peji rewebhu. Iyo inogona kuve iri diki mhinduro yekubuda munzira munzira pakutanga uye zvakare hazvizokubhadhare iwe kuyedza kukuru kuti uzviite.
Sezvaungave iwe waona, ichi chiitiko chakakomba kwazvo chinogona kuitika kwauri. Asi nhau dzakanaka ndedzekuti iwe une isina kujairika nzira yekugadzirisa zvakapetwa zvemukati. Mune zvimwe zviitiko, neshanduko yezano rekushambadzira uye mune mamwe, uchinyanya kungwarira zviito zvako pachako pane izvi zvemukati zvemukati.
Ndokunge, iwe une zvakakwana zvirongwa uye matanho aunogona kutora kudzikisa, kana kudzivirira, kuteedzera zvirimo pane yako webhusaiti. Zvekuti nenzira iyi, njodzi yekugamuchira chirango inodererawo. Izvo kune rimwe divi, pasina mubvunzo zvinokanganisa shanduko yechiitiko chehunyanzvi paInternet.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » Marketing » Maitiro ekugadzirisa zvakapetwa zvirimo mubhizinesi rako redhijitari?
ChiGerman david akadaro
Semuenzaniso, ini ndakatumira chirevo ichi pamapeji akati wandei, zvinokanganisa peji rino here?
Panyaya yemapeji akaparadzirwa emashambadziro, iwo anofanirwa kuverengerwa here? Izvi zvinodaro nekuti vanoshambadzira 'vanoteedzera-kunama' zita uye / kana tsananguro kutengesa masevhisi kana zvigadzirwa.
Pindura kuGerman David
Mazano ekugadzira nharaunda yakatenderedza eCommerce
Maitiro ekushandisa sei piramidhi yeMaslow muCommerce?